गोकुल बाँस्कोटा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा कसले बोल्यो अपशब्द ? – मिलिजुली खबर
गोकुल बाँस्कोटा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा कसले बोल्यो अपशब्द ?
पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा दुर्ब्यवहार भएको पाईएको छ । पूर्व मन्त्री बाँस्कोटा आज मण्डनदेउपुर नगरपालिको ५ मा एमालेले आयोजना गरेको बृहत वडा भेला कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।
वडा भेलामा सहभागि हुँदा नम्बर ८ का अग्रज ब्यक्तिले आफुहरू माथि अपशब्द प्रयोग गरेको सुदिप चौलागाईले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चौलागाईले लेख्नु भएको छ: आज मण्डनदेउपुर नगरपालिककाको ५ मा वडा भेलामा सहभागि हुँदा वडा नम्बर ८ को अग्रज ब्यक्तिले हामी माथि अपसब्द प्रयोग गरेको कारणले हामी कार्यक्रमबाट बाहिरियौ ।’
सुदिपको यो पोष्टको कमेन्ट बक्समा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका आधा दर्जनभन्दा बढीले अपशब्द बोल्ने मान्छेको नाम बताउन आग्रह गरेका छन् । तर सुदिपले अहिल्यै नबताउने र समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने रिप्लाई दिनुभएको छ ।
मिलिजुली खबर डटकमसंग पनि सुदिपले आफुहरू माथि अपशब्द प्रयोग गरेर दुर्ब्यवहार भएको स्वीकार गर्नुभयो । मिलिजुली खबर डटकमले तपाई एमालेको संगठीत सदस्य वा शुभचिन्तक हो ? भनि सोधेको प्रश्नको जवाफमा सुदिपले आफु दुबै नभएको र केबल कार्यक्रममा सहभागी हुन् मात्रै गएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष बिदुर सापकोटा, नेताहरू कञ्चन अधिकारी, रिता ढकाल, कुमार भट्टराई लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।